Welcome to Taungoo Blog: May 2008
ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ သူ မရှိတော့
ပြုံးနေရတဲ့ အပြုံးက မျက်နှာခပ်ငယ်ငယ်ရယ်.... .... .....
ဇာတ်လမ်းအစမှာ.... တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်
ခလုတ်တိုက်တာလောက်တောင်မှပဲ မနာကျင်ခဲ့ဖူးဘူး ....
နေပူပူကြီးထဲ လေပြင်းတွေ ဖွာလန်ကျဲလို့
အခုတော့ ..... ကျွန်တော့်နှလုံးသားလေး
အဖျားသွေးတွေတက်လို့ရယ် ..... ..... .....
သူ့ဘက်က ဖုန်းလိုင်းဖြတ်ထားတယ် ၊
ကျွန်တော့်အကြောင်း အတင်းပြောတယ် ၊
ရေပေါ်ထွက်ပြေးမလား ၊ လေပေါ်ထွက်ပြေးရမလားနဲ့ရယ် ..... ..... .....
ခေါင်းမော့ ၊ ရင်ကော့ ၊ လက်မ ထောင် ၊ နှုတ်ခမ်းမဲ့ ၊ မျက်စောင်းထိုးပြီး
သူ့ဘက်အခန်းမှာ အော်စကာတွေအပြည့်နဲ့ရယ် ..... ..... ...... ။
Author : မောင်မောင်သက် |
ခေါင်းစဉ် - ဟာသ
Offline mode နဲ့ Gtalk ပြောဆိုခြင်း
သင့် online မှာ ရှိ ရဲ့ သာ နဲ့ တခြား Gtalk User တွေက သင့်ကို Offline မှာ ရှိနေတယ်..လို.ထင်ရအောင်......
offline mode နဲ့ Gtalk ပြောမယ်ဆိုရင်....
ပထမဆုံး Gmail ကိုဖွင့်ရပါမယ်........
Gmail က chat Box ရဲ့ ........
ကိုယ်နာမည်ဘေးက arrow မှာ...
click နိုပ် လိုက်ပြီး....
သင့်ကို....တခြာuးser တွေ့က သူတို့ chat box မှာ offline ဖြစ်သွားပါ လိမ့်မယ့်......
Author : Big C |
Author : သူရ(စိတ်ပညာ) |
Fileden is banned!
အခုတလော ဂျီမေးလ်တွေပြန်ဖွင့်ပေးတယ်(gmail.com)၊ ဘလော့တွေပြန်လော့အင်ဝင်လို့ရပြီ(blogger.com) ဆိုလို့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ကြိုဆိုနေမိပါတယ်။ Mpt ကိုသုံးတဲ့ 203.81.80.83 (ကျွန်တော်သုံးတာ) နဲ့ 203.81.80.81, 203.81.80.80 မှာ ရတယ်လို့ကြားပါတယ်။ 203.81.72.200 နဲ့ ygncache.mpt.net.mm ကိုတော့ ကျွန်တော်သေသေချာချာ ပြန်မစစ်ကြည့်ရသေးဘူး။ အဲ့ဒီပရိုဆီတွေကတော့ ခုတလောသိပ်သုံးလို့မကောင်းဘူး။ ဒီကြားထဲမှာ ပရိုဆီတွေရုတ်တရက်ချိန်းတာ၊ Client Log in ခဏခဏပြန်ဝင်ရတာတွေ ကြုံရပါသေးတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ Banned (or) Blocked ။ အဲ့ဒါတွေက စမ်းနေတာပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပေါ်လစီနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ပိတ်ထားတာလားတော့ ကျွန်တော်မသိတော့ပါ။ ဒီအထဲမှာ Upload & Download အဆင်ပြေတဲ့ fileden.com ကို ဘန်းလိုက်ခြင်းပါပဲ။ ဒီအတွက် တောင်ငူဘလော့က ဖိုင်ဒန်းမှာ ယူထားတဲ့ လင့်တွေကို ပြန်ပြောင်းရပါတော့မယ်။ အကုန်လုံးပြောင်းဖို့ရာကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ ခုလောလောဆယ်တော့ ဖောင့် (font pack) ကို ပြန်ရွှေ့ရပါမယ်။ အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့။
Author : စည်သူ |
ခေါင်းစဉ် - စပ်မိစပ်ရာ
ငါ့အိမ်မက်လေးတွေ ပိန်တချည်၊ ပြားတလှည့်ပေါ့။
ပုံမှန်လွေးရအောင် နေရောင်ပူအောက် လျှောက်ရဦးမယ်
.... “ဟောဒီက ရေသန့်ဗူးခွံတွေ ၀ယ်တယ်ဗျို့” ....
Author : ဦးဦးတောင်ငူ |
You are lazy when your life is simple.
Author : Anonymous |
မစောင့်ဘူးလို့တော့မပြောပါနဲ့... အားနာပါးနာ စောင့်နေတယ်လို့သာပြောလိုက်
ဦးဦးတောင်ငူနံမည်နဲ့ နာမ်စားသုံးပြီး တောင်ငူဘလော့ဂါအဖွဲ့ကိုယ်စား Ask Me! ကို အဖြေထုတ်ပေးတော့ပါမယ်။ အခုတော့ ဦးနှောဏ်ခြောက်ခိုင်းထားတယ်။ စားနေကြပီ။ အမေးထဲမှာ တချို့သော မေးခွန်းမကျတာတွေကို ပယ်ပါ့မယ်။ သိပ်မကြာခင် (မနက်ဖြန်/သို့/သဘက်ခါ) အဖြေပေးမယ်နော်။ စောင့်နေ
တောင်ငူက Cyber shop များ
ကျွန်တော်တို့တောင်ငူမှာအခုဆိုရင် cyber shop ၄ ခုရှိသွားပါပြီ။
လူကြီးမင်းတို့ တောင်ငူကိုရောက်ရင် အင်တာနက်အသုံးပြုလို့ရအောင် ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။
1.Netstar (လိပ်စာကတော့ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေး၊ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းရှေ့)
2.Century (လိပ်စာကတော့ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေး၊ ဆက်သွယ်ရေးရုံးရှေ့)
3. Harmony (လိပ်စာကတော့ ဦးပန်းဖြူလမ်းက Harmony Snack Bar မှာ)
4. စိတ္တသုခ (လိပ်စာကတော့ တောင်ငူမြို့တွင်းက ကုန်သည်ကြီးလမ်း၊ စိတ္တသုခ ဆေးဆိုင်မှာ)
ကျွန်တော်စာရေးဆရာကြီးကောင်းသန့်ရဲ့ သမီးလေးဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ရပါတယ်….
အဲဒီထဲမှာ လောကကြီးထဲမှာ တန်းဖိုးရှိရှိနေချင်ရင်၊ သတိရှိရှိနေရမယ်…..တဲ့
၁၃၇၀ နှစ်သစ်ကူးတော့မှ ပဲသိခဲ့ရပါတယ်…..
ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်မေမေကို အေးအေးချမ်းချမ်းရှိတဲ့နေရာနေချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့…. ကျွန်တော့်မေမေက တရားစခန်း(သာသနာရိပ်သာမှာစာရင်းသွင်းထားခဲ့တယ်….. အလုပ်ကခွင့်ရတော့ တခါတည်း တောင်ငူမြို့၊ နံပါတ်(၁)လမ်းအဆုံး(မြောက်ဘက်)မှာ ရှိတဲ့ ဝေဋ္ဌုဝန်သာသနာရိပ်သာသို့သွားခဲ့ပါတယ်…..
အဲဒီရောက်တော့ တော်တော်အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးပဲ….. လူဦးရေကို လက်ချိုးရေတွက်လို့တောင်ရတယ်…. ၁။ဘုန်းကြီး ၂။ဦးဇင်း ၃။ကိုယ်ရင် ၄။ဆရာလေး ၅။ဒါယကာကြီး ၆။ဒါယိကာမကြီး ၇။တပည့်တော် စတဲ့ လူဦးရေတွေနဲ့ပဲ ကြုံတွေဆက်ဆံခဲ့ရပါတယ်……
အဲဒီသာသနာရိပ်သာကျောင်းတော်ကြီးကို ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ မနက်ခင်း ၃း၃၀ အိပ်ရာက ထရပြီး (၄)နာရီမှ (၅)နာရီ၊ (၆း၀၀)မှ(၇း၀၀)နာရီ၊ (၈း၀၀ မှ ၉း၀၀)အထိ တစ်နာရီကြားတစ်ခါ တစ်နာရီ တရားထိုင်ရပါတယ်… (၁၀း၃၀ မှ ၁၁း၃၀)အထိ ဆွမ်းဘုန်းပေးရပါတယ်…. ပြီးတာနဲ့ (၁၂း၀၀ မှ ၁း၀၀)၊ (၂း၀၀ မှ ၃း၀၀)၊ (၄း၀၀ မှ ၅း၀၀)၊ (၆း၀၀ မှ ၇း၀၀)၊ (၈း၀၀ မှ ၉း၀၀)အထိ တရားကျင့်ကြံအားထုထ်ရပါတယ်….
သာသနာရိပ်သာကြီးမှာတော့ (သိလ၊ သမာဓီ၊ ပညာ ၊ စသည့်)တို့ ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြပါတယ်....
အဲဒီသာသနာရိပ်သာကြီးကတော့ ကျွန်တော်ကို သတိနဲ့နေတက်အောင် ပညာပေးခဲ့ပါတယ်...
သမာဓိတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ ခန္ဒာကိုယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဖြစ်ချင်း၊ ပျက်ခြင်း၊ အနိစ္စတရားတွေကို သတိကို ၀မ်းဗိုက်မှာကပ်ပြီး (ဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်.... ပိန်ရင်ပိန်တယ်)လို့ ရှုမှတ်ပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့စိတ်ရဲ့ ခံစားမှုမျိုးရရှိခဲ့တာ ဘ၀အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပဲလို့ ..... မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့ပါတယ်....
(ကိုစည်သူရေ...ဒီအပိုဒ်လေးကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဦးဇင်းက ကူညီခဲ့ပါတယ်...)
ကျွန်တော်သိတာကတော့.... လမ်းလျှောက်ရင်းရှူမှတ်နည်း... လမ်းလျှောက်နေရင် (ကြွတယ်... လှမ်းတယ်..... ချတယ်..... နင်းတယ်...... ကြားတယ်..... မြင်တယ်...... )စသည့်တို့ကို ထပ်ခါထပ်ခါ သတိမပြတ်မှတ်ယူရပါတယ်..... ကျွန်တော်နည်းနည်းခံစားဘူးပါတယ်.... (၅)မိနစ်လောက်ကြာသတိနဲ့ လမ်းလျှောက်နေတော့.... ၁ စက္ကန့်လောက် ခန္ဒာကိုယ်တစ်ခုလုံး ပေါ့ပါးသွားခဲ့ပါသေးတယ်.....
ဒါကြောင့် ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ တောင်ငူမိတ်ဆွေများကို မသေခင်အချိန်အတိုအတွင်း တရားမှတ်တက်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့နှင့် သေတောမယ့်အချိန်မှာ တရားနဲ့ အဆုံးသတ်သွားနိုင်ရန်ရည်စူးပြီး ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်..... (တရားနဲ့သေရင် နည်းနည်းတော့မြတ်ပါတယ်....)
ခေါင်းစဉ် - ဓမ္မဆိုင်ရာ
W@rez ဆိုတာဘာလဲ? အဲ့ဒါကို အရင်ရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ W@rez ဆိုတာ UnderGround (or) Black site တွေပါပဲ။ ဆိုလိုတာက တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ဆိုဒ်တွေပါ။ အဲ့ဒီဆိုဒ်တွေကနေတစ်ဆင့် သင်ဟာ သင်လိုချင်တဲ့ သီချင်းတစ်ခွေ (ဒါမှမဟုတ်) ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုကို ပိုက်ဆံချေစရာမလိုပဲ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှတ်ထားရမှာက သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန် (Software, Music, Video etc.) တွေဟာ Copyright ကို ဆန့်ကျင်နေတာပါပဲ။
W@rez တွေကို ပြုလုပ်တဲ့ပုံစံကတော့ အဖွဲ့အစည်း (သို့) တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်နက်ဝက် (darknet) ကိုတည်ဆောက်ပြီး သူတို့အချင်းချင်း (ဒါမှမဟုတ်) သူတို့ယုံကြည်ရတဲ့လူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ကြ၊ ဖိုင်တွေကို PC to PC / P2P (peer to peer) ပုံစံနဲ့ ဝေမျှကြတာပါ။
warez sites (http Sites)
FTP servers (e.g : ftp://123.45.67.88)
Peer to Peer (Kaaza, Bit Torrent, WinMX etc.)
IRC channels (from mIRC chatting Softwares)
P2P (same as PC to PC) ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရှယ်ရာလုပ်ကြပါတယ်။
သူတို့သုံးတတ်တဲ့ Terms တွေကို ပြောပြပါမယ်။
ISO files နဲ့ Rip
Iso ဆိုတာက သင်ဟာအခွေဆိုင်ကနေ၀ယ်ရင် ရနိုင်မယ့်ဖောမက်မျိုး အလုံးစုံပြီးပြည့်စုံ နိုင်တဲ့ဖိုင်ပါ။ စီဒီတွေကို burn ဖူးတယ်ဆိုရင် ဒီဖောမက်ကို သိပါလိမ့်မယ်။
Rip ကတော့ ထုတ်နှုတ်ထားတာပါ။ ဥပမာ - အသံတွေ၊ အရုပ်တွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့။
Iso file ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်တယ်ဆိုရင် အချိန်ကြာမြင့်စွာယူရတတ်ပေမယ့် Rip file တွေကတော့ အဲ့ဒီလောက်ကြီးမကြာနိုင်ပါဘူး။
နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ "Serial or Key Generator or Crack" - ဒါတွေကိုတော့ အင်စတောလုပ်ဖူးတဲ့သူတိုင်း ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဖိုင်တွေဟာ Free Trial လို့ခေါ်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေပေးထားတဲ့ နမူနာဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ ဖိုင်တွေ ဂိမ်းတွေကို အပြည့်သုံးနိုင်အောင် ကြံဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဖိုင်လေးတွေပါ။ Free Trial တွေဟာ သူတို့ပေးထားတဲ့အချိန် (ဒါမှမဟုတ်) သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက် (ဒါမှမဟုတ်) သတ်မှတ်ထားတဲ့အခန်း တွေကိုရောက်ရင် အဆိုပါ Software (or) Game ဟာ ဆက်သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆက်သုံးလို့ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေပါ။ ဥပမာပေးရရင် သော့တံ တစ်ချောင်းနဲ့ ဆင်ပါတယ်။
တခါတလေ တွေ့ရတတ်တဲ့ဖိုင်တွေအနေနဲ့ကတော့ Zip လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေပါ။ (.zip, .rar) ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ဖိုင်တွေဟာ rar ဖိုင်ကိုမှ ဒေါင်းလုဒ်/အပ်လုဒ် အဆင်ပြေအောင်ခွဲထားတတ်ကြပါတယ်။ ဖိုင်တွေပြန်ဖြည်တဲ့အခါကျရင် ဖိုင်စုံအောင်ဒေါင်းလုဒ်မလုပ်ထားရင် error တွေတက်တတ်ပါတယ်။ (eg : some.rar.001, some.rar.002, -or- some_part1.rar, some_part2.rar)
Video Format တွေကတော့
Svcd ကတော့ quality အကောင်းဆုံးဖြစ်လို့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတတ်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရတာ အချိန်ယူတာ ကြာနိုင်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် DivX ဖောမက်နဲ့ Xvid တွေအနေနဲ့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့လို ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေအတွက် မတတ်နိုင်သေးတဲ့ နိုင်ငံတွေက အဲ့ဒီဆိုဒ်မျိုးတွေကို အားကိုးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ (illegal ဖြစ်သော်ငြားလည်း) ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အွန်လိုင်းပေါ်က (ပိုက်ဆံရှိလို့/တတ်နိုင်လို့) ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုကို ၀ယ်မယ်ဆိုပါတော့ ငွေချေတဲ့ကိစ္စမှာ အများကြီးပြဿနာတတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ pirate ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေသုံးကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကြောင့်ပါ။ နောက်ပိုင်း Copyright တွေပေါ်လာရင်တော့ ...............
Ps : warez တွေကို ကြည့်ချင်ရင်တော့ www.warez.com (ပိတ်ထားကောင်းပိတ်ထားပါလိမ့်မယ် - maybaccess denied) www.warez-bb.org (it'saforum)
တောင်ငူ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူပွဲ (အပိုင်း-၁၊ အစဉ်လာမပျက်ပူဇော်)
တောင်ငူနှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူပွဲတော်ဟာ ယခုနှစ်တွေမှာ ပျဉ်းမနားနှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူပွဲလောက် မစည်ကားတော့ပေမယ့် နှစ်စဉ်မပျက်မကွက် ကျင်းပပူဇော်မြဲပါ။ တောင်ငူမှာ ရွှေဆံတော်ဘုရား၊ မြစည်းခုံဘုရား၊ ကောင်းမှုတော်ဘုရား၊ နဂါးရုံဘုရား၊ ကေလဇာတီဘုရား နှင့် မြတ်စောညီနောင်ဘုရားများ စသော ထင်ရှားတဲ့ ဘုရားများစွာတည်ထားကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ ယခုနှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူပွဲတော်ဟာ ကေလဇာတီဘုရားမှာ ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူသည့် နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူကုန်သောမြတ်စွာဘုရားများ မြို့တွင်းသို့ ဒေသစာရီကြွချီရာမှာ တောင်ငူမြို့ပေါ်သာမက အနီးနားမြို့ရွာများမှပါမကျန် လာရာက်ဖူးမြှော်ကြလို့ အင်မတန်စည်ကားလှပါတယ်။ နှစ်စဉ်လှည့်လည်အပူဇော်ခံရာမှာ နေ့ခင်းပိုင်းဒေသစာရီကြွချီ်ပွဲကို တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၁၃) ရက် ညနေပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်၊ အာရုဏ်ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲကို တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နံနက်အာရုဏ်တက်မှာတစ်ကြိမ် ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ နေ့ခင်းပွဲမှာ ရပ်ကွက်များ၊ အစိုးရဋ္ဌာနများ၊ ဘာသာရေး လူမှုရေးအသင်းဖွဲ့များနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များမှ ဘုရားတစ်ဆူကျစီကို ပူဇော်ပွဲမတိုင်ခင် ရက်ပိုင်းအလိုကပင် ယာယီစံကျောင်းများသို့ ပင့်ဆောင်ကြပါတယ်။ လှည့်လည်ရာတွင် ဘုရားများပင့်ဆောင်မည့်ကားများကို ပန်းချီဆေးရေးများ၊ မီးပန်းဆိုင်းများ၊ မြန်မာ့ရိုးရာအနုပညာလက်ရာများဖြင့် သပ္ပါယ်ကြည်ညိုဖွယ်ဖြစ်အောင် အထူးထူးစီမံပူဇော်ကြပါတယ်။ လဆန်း(၁၃)ရက် ညနေချမ်းမှာတော့ နှစ်စဉ်ဗဟိုမဏ္ဍပ်တည်ရှိရာ လမ်းမကျယ်ထောင့်တွင် အခမ်းအနားဖြင့်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး လမ်းမကျယ်လမ်း၊ ဗိုလ်မှူးဖိုးကွန်းလမ်းတို့မှ စတင်ကာ မြို့တွင်းသို့ ဒေသစာရီကြွချီပါတယ်။ ဗဟိုမဏပ်မှ ဘုရားများ ပူဇော်ရာတွင် ထူးခြားဆန်းကြယ်စွာ တန်ဆာဆင်နိုင်သော အဖွဲ့များအား ဗဟိုမဏ္ဍပ်မှ ဆုများချီးမြှင့်ပါတယ်။ ရွှေနှင်းဆီဆေးလိပ်ခုံ၊ ပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းတို့ကတော့ ရှေ့ဆုံးဘုရားအမှတ်(၁) နှင့် (၂) တို့ကို မင်္ဂလာစည်တော်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဒေဝါဝင်း ရာဇာဝင်း(မင်းခမ်းမင်းနား) ခင်း၍လည်းကောင်း ပင့်ဆောင်မြဲပါ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ မြို့မဈေးကြီးမိသားစု၊ ဘုရင့်နောင်ဈေးမိသားစုနှင့် ရပ်ကွက်များမှ မင်းသားအက၊ ဦးရွှေရိုးအက၊ ကျွဲနှစ်ကောင်အက၊ လူရိုင်းအကအစရှိသောမြေဝိုင်းအကမျိုးစုံ၊ တရုတ်အမျိ်ုးသားများရဲ့ ခြင်္သေ့ နဂါးအက၊ ဟိန္ဒူအဖွဲ့၊ ချစ်တီးယားအဖွဲ့ အစရှိသော ဘာသာရေး လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့အသီးသီးတို့မှ အတီးအမှုတ်အကအခုန်များဖြင့် လှည့်လည်ပင့်ဆောင်ကြပါတယ်။
Author : komatt |
နှမတော်သို့ .....
လွမ်းပီးရင်းလွမ်းရတဲ့ ဒီဘ၀ရဲ့ နတ်ရှင်နောင်ဟာ
နှလုံးသားရဲ့ ငိုသံကို နှလုံးသားနဲ့ပဲ
အသည်းရဲ့ `ရှိုက်သံကို အသည်းနဲ့ ပဲ
ဘ၀ရဲ့ ဒုက္ခကို ဒုက္ခလိုပဲ ခံစားမှ
အတ္တနဲ့ မမျှော်ချင်ဘူး နှမတော်..............
ဘ၀ကိုခြစားခံတဲ့ မမျှော်ချင်သူရဲ့ နှလုံးသား
ဘာရေးရမလဲဆိုပြီးစဉ်းစား စဉ်းစားရင်းနဲ့မိုးလင်း အဲလေ ရောကုန်ပြီ အဲဒါနဲ့ပဲ စဉ်းစားရင်း ချက်တင်ထိုင် အဲလေ ဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုဗျာ
ဘယ်ကစပြောရမလဲကိုမသိ ကလေးကလည်း ငိုနေပြီ ဘာမှမဆိုင်ဘူး အဟဲ အချိန်ရတုန်းလေး ကြေငြာဝင်ချင်လို့ဗျာ ကျွန်တော်က သိပ်လည်း မ၀င်
နိုင်ဘူးလေ ကြုံတုန်းလေး ပြောရတာ ဒီလိုဗျ ကျွန်တော်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေတဲ့ ဆော့စ်ဝဲဆိုဒ်လေးတွေ ပြောပြချင်လို့ဗျာ သိပြီးသားလည်း
ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် မသိသေးရင်လည်း ယူလိုက်ဗျာ စပြောပြီနော်
www.filehippo.com ဒီဟာက ဆော့စ်ဝဲတော်တော်စုံသလို update လည်း မှန်မှန်ရှိတယ်ဗျ ကျွန်တော်တော့ ကြိုက်တယ် နောက်ဟာ
တွေကတော့ ဖိုရမ်တွေပါ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုမေးစရာရှိတယ် ဖိုရမ်ဆိုတော့ မရမ်ရောရှိသေးလားလို့ပေါ့ အဲ . . . အဲဒါတော့ အက်မင်ဂျီး
မေးကြည့်မှပဲသိမှာပဲ အနော်လည်း သိဘူးဗျ အခုဆော့စ်ဝဲဖိုရမ် အနည်းငယ်ပြောပြမယ်ဗျာ
www.forumw.org နဲ့ www.projectw.org ပါ သူကတော့ အကောင့်လုပ်ပြီး အသင်းတော့ ၀င်ရပါတယ် သတိသာထားပေတော့ :P
ကဲ ဒီလောက်ပဲဗျာ နောက်မှ ဆက်ရှာပြီး ဆက်ပြောပြမယ်နော် . . .
Author : ချစ်လား |
Ask Me! (မေးပါ မေးပါ မေးလိုက်ပါ)
ဒီအခန်းလေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့တာ စဉ်းစားခဲ့တာကြာပါပြီ။ Ask Me! မေးခွန်းများကဏ္ဍလေးပါ။ စမ်းသပ်ဆဲအဆင့် (BETA) ပဲရှိပါသေးတယ်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပါ။ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ အချို့အချို့သော မဂ္ဂဇင်းတွေမှာပါတဲ့ ကြိုက်တာမေး ကြိုက်တာဖြေတတ်ကြတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို တွေ့ဖူး မြင်ဖူးကြမလားမသိဘူး။ ဥပမာ အနေနဲ့ - သပြေမဂ္ဂဇင်းမှာဆိုရင် “ဦးဦးသပြေဖြေပါ”၊ မျှားနတ်မောင်မဂ္ဂဇင်းမှာဆိုရင် “ဦးဦးမျှားနတ်မောင်ဖြေပါ” .... စသဖြင့်ပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း အကုန်လုံးကို သေချာမသိပါဘူး။
နမူနာမေးခွန်းမေးပြရမယ်ဆိုရင် - “အူဝဲလေးဘာလို့ ယောက်ျားမယူသေးတာလဲ” ပေါ့။
အဲ.. နမူနာအဖြေကိုတော့ ကိုယ့်ဘက်ယက်ပြီး စဉ်းစားသာကြည့်ပါလေရော့ အဆွေတော်.....
p.s : please be polite question.
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ Ask Me! ထဲမှာ အဖြေတွေ မရေးပေးကြဖို့ ပထမဦးဆုံးတောင်းဆိုလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Ask Me! (http://askme.taungoo.net) စာမျက်နှာဟာ မေးခွန်းများအတွက် သီးသန့်ပဲ ဖြစ်စေလိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဖြေကဏ္ဍအတွက် တစ်ပါတ်တစ်ခါ (သို့) နှစ်ပတ်တစ်ခါနှုန်းနဲ့ မေးခွန်းများရင် များသလောက် ဘလော့ထဲမှာပဲ ပို့စ်တစ်ခုအနေနဲ့ ဖြေပေးမှာပါ။ အလျင်အမြန်လာမေး၍ စောင့်ကြည့်တော်မူကြပါကုန်။
ကျွန်တော်တို့ပဲပေါ့ ... :) ..
ဆိုလိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားအပေါင်း ၀ိုင်းဝန်းစဉ်းစားပြီး အဖြေထုတ်ပေးမှာပါ။ (ကလိထိုးပြီး ရယ်ဖို့သာပြင်ထား)
အခုစပြီလေ... သွားမေးတော့ ... ဒီမှာ
p.s : ဒီအကြောင်းကြိုးပမ်းခဲ့ပုံကို သိချင်ရင် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးမှာ မှာဖတ်ကြည့်ပါ။
သတိတရနှင့် မေ့မရသည် (ရသစာတမ်းငယ်)
ကောင်မလေးရေ....... အနမ်းတစ်ခုအတွက် ကျမ်းတစ်စောင်ဖွဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ပန်းခူးဖို့အတွက် လှမ်းချူတဲ့လက်တစ်စုံမှာ မြေနံ့တွေ ထုံနေတယ်။ ငါ့အတွက် မင်းဟာ..... ရေသန့်ဆိုလည်း ဟုတ်တယ်၊ ကော်ဖီတစ်ခွက်ဆိုလည်း ဟုတ်တယ်၊ ဒိုင်းနမိုက် သကြားလုံးလည်း ဟုတ်တယ်၊ ချိုပျစ် တစ်ခွက်လည်း ဟုတ်တယ်။
အဲ့ဒီနေ့ပေါ့ ကောင်မလေးရေ........ အဖြူရောင် ၀မ်းဆက်လေးနဲ့ မြက်ခင်းပြင်ပေါ်က မင်းဟာ ဗျိုင်းတစ်ကောင် အလားပဲ။ ငါ့မျက်စိတွေ ကျိန်းစပ်လွန်းလို့ မင်းကို ပုဏ္ဏရိပ်ကွယ်ကနေ ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ မျိုသိပ်မလွယ်တော့လည်း အသိုအသိပ်မတတ်လို့ ယိုဖိတ်ခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်း ငါ... မတွေးမိခဲ့ဘူး။
နာရီလက်တံတွေ သူ့အတိုင်းလည်နေတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ သူ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ။ ဒါပေမယ့် ကြားနေရတဲ့ အသံတွေဟာ နားထဲမှာ ချိုပစ်နေတယ်။ သက်တံတွေဟာ ကိုင်းလာတယ်။ ငါ့ရဲ့ ...မြေမှုန်တွေနဲ့ ပေကျံနေတဲ့လက်ပေါ် ဗျိုင်းလေး လာနားတယ်။ ငါ....လေ.... ပျံသွားမှာဆိုလို့ လှုပ်တောင် မလှုပ်ရဲခဲ့ဘူး။ အသက်တောင် ပြင်းပြင်း မရှုခဲ့ဘူး။ ငါ မသိလိုက်တာက အဲ့နေ့ကစပြီး ငါ့လက်ဟာ ကျိန်စာသင့်တော့တာပါပဲ။
တစ်ရက် တစ်နေ့နဲ့ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ နေ့လေးတွေ ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။ ဟော... အနောက်တောင်မိုးတွေ ရောက်လာတယ်။ အဲ့နေ့က စပြီး မင်းဟာ အရှေ့ကိုပဲ ကြည့်တော့တယ်။ အရှေ့ဘက်မှာ မင်းသိပ်ကြိုက်တဲ့ မြက်ခင်းစိမ်းလှလှတွေ ရှိတယ်။ အစားခံဖို့စောင့်နေတဲ့ ငါးလေးတွေရှိတယ်။ မင်းပျော်မြူးနိုင်တဲ့ ရေကြည်အိုင်လေးတွေ ရှိတယ် မဟုတ်လား။ ပြီးတော့ မွှေးပျံ့နွေးထွေးတဲ့ လက်တစ်စုံ ရှိတယ်။ အဲ့အချိန်ကစပြီး ငါ့လက်ဟာ ရွံ့နွံတွေ ပေါက်နေတော့တာ...။
ငါ့ရဲ့ ဘယ်ဘက်လက်မှာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားတဲ့ မစိမ်းတစိမ်း မြက်ခင်းလေးရယ်၊ ငါ့ရဲ့ ညာဘက်လက်မှာ မရှု့မလှနဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ ငါးပေါက်လေး ရှိတယ်။ ငါ့ရင်ဘတ်ကတော့ ၀မ်းနည်းမှုတွေ တစ်စက်ပြီးတစ်စက် ကျနေလေရဲ့ ။
ရတုဘုရင် နတ်သျှင်နောင်ဟာ ရတုအလွမ်းလင်္ကာတွေရေးပြီး ဓါတု ကလျာဆီ ဆက်သခဲ့ခြင်းဟာ “မြတ်နိုးစွာ ချစ်ခဲ့မိလို့ပါ” ။
ကေးဝဋ်ပုဏ္ဏားဟာ နဖူးက အမာရွတ်ကိုမြင်တိုင်း မဟော်သဓါကို သတိရခြင်းဟာ “နာကျည်းစွာ မုန်းတီးခဲ့လို့ပါ”။
လူ့ဘ၀ဆိုတာ မြတ်နိုးစွာချစ်ခဲ့မိလို့ သတိတရ ရှိတတ်ကြသလို၊ နာကျည်းစွာ မုန်းတီးခဲ့ရင်လည်း မေ့မရဘဲ ရှိတတ်ကြတယ်......။
ခေါင်းစဉ် - ရသစာတမ်းငယ်
ချစ်တယ်သိပ်ချစ် ရင်ဖွင့်ပစ်ချင် .......
စွဲငြိနေဆဲ စိုးမိုးဆဲလေ .........
စိမ်းလေမလား ယိမ်းလေမလား ......
ဘာသာစကား (Gtalk ဘာသာပြန်)
gtalk မှာ ADD ကြည့်လိုက်ပါ
(Translate from english to chinese)
(Translate from chinese to english)
(Translate from bulgarian to english)
(Translate from german to english)
(Translate from english to german)
(Translate from german to french)
(Translate from french to german)
(Translate from greek to english)
(Translate from english to greek)
(Translate from spanish to english)
(Translate from english to spanish)
(Translate from finnish to english)
(Translate from french to english)
(Translate from english to french)
(Translate from hindi to english)
(Translate from croatian to english)
(Translate from italian to english)
(Translate from english to italian)
(Translate from japanese to english)
(Translate from english to japanese)
(Translate from corean to english)
(Translate from english to corean)
(Translate from dutch to english)
(Translate from english to dutch )
(Translate from russian to english)
(Translate from english to russian)
(Translate from ucranian to english)
(Translate from urdu to english)
(Translate from english to arabian)
(Translate from arabian to english)
စကားပုံအမျိုးအစားတွေကိုစိစစ်မယ်ဆိုရင် ဆုံးမသြ၀ါဒပေးလို၍ ဖြစ်ပေါ်လာသောစကားပုံ၊
သတိပေးလို၍ ဖြစ်ပေါ်လာသောစကားပုံ၊ မြှောက်ပင့်ချီးမွမ်းလို၍ ဖြစ်ပေါ်လာသောစကားပုံ၊
နှိမ့်ချကဲ့ရဲ့လို၍ ဖြစ်ပေါ်လာသောစကားပုံ၊ အမျက်ဒေါသထွက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသောစကားပုံ၊
တရားသံဝေဂရ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသောစကားပုံစသည်ဖြင့် စကားပုံအမျိုးအစား အများအပြားရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။
အခုမျှဝေချင်တဲ့စကားပုံတွေကတော့ ကျွဲခြံဆရာတော် အရှင်ပဏ္ဍိတဘိဓဇ စုဆောင်းထားတဲ့ပေါရာဏစကားပုံများပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁။ မင်းမရှိသောပြည်၊ အမှုမရှိသောတရား၊ စကားမတတ်သောရှေ့နေ၊ မပြေပြစ်သောသံတမန်၊
ကျမ်းဂန်မတတ်သောရဟန်း၊ တိုင်တန်းသူမရှိသော ကြွေးရှင်ယောကျာ်းကဲ့သို့အမှားမှား အယွင်းယွင်း
၂။ အဘမရှိ အမိမဲ့သား၊ လင်မဲ့သည့်မိန်းမ၊ မယားမဲ့သည့် ယောက်ျား၊ အရှင်မဲ့သည့်ကျွန်၊
၃။ ဖွဲပုံ၌နှက်သောတံသင်း၊မြင်းကျောက်ကုန်း၌တင်သော ဖရုံသီး၊
သူကြီးမအုပ်သောငယ်သား၊ အထိန်းမထားသောချည်ခင်ကဲ့သို့ အရှည်မမြဲ ဘောက်လွဲရာသည်။
၄။ အဘရှိ အမိမဲ့သည့်သား၊ ချွန်းဖျားမအုပ်သောဆင်၊ မျဉ်းမတင်သောလွှ၊
တက်မရှိသောလှေ၊ရှေ့နေခုံမအုပ်သောတရား၊ အနားစုတ်ပြတ်သော ယပ်ပုဆိုး၊
ဆိုသကဲ့သို့ ခုံယူတခြား တရားတထွေ၊ ဆင်ခြေလိမ်လည်၊ အမှုသည်ပြောင်းပြန် ရှိဟန်ဆိုမိသည်။
၉။လူကိုအမျိုး၊ မြင်းကိုဆက်ကြိုး၊ရေကိုအရိုး၊ လှေကိုဝါးထိုး။
၁၃။ရေရိုးကိုကျင်လည်သော် ရေတိမ်ရေနက်ကိုသိလွယ်၏ ၊
မင်း၌ခယမ်း၍ မင်းရိပ်မင်းခြေကို သိခက်သည်။
၁၄။ချီးမွမ်းလွန်းသော် မချေငံ၊ အပြစ်တင်လွန်းသော် မကျိုးနွံ။
၁၅။သစ်ပင်ကြီးအရိပ်ကိုခိုသော် အပူပျောက်၏ ၊ သစ်ပင်ပိသောဘေးရောက်၏။
၁၆။စာသူငယ်ဆင်ပြောင်ကိုမလေး ၊ မြေခွေးကျားကိုမခန့်။
၁၇။အ၀င်လွန်သော် အထွက်ခက်၏ ၊ အချစ်လွန်သော် အတင့်ရဲ၏။
၁၈။ကြက်ကန်းအစာကောက်သည်ကား ကျောက်ခဲသလဲစားမိ၏ ၊
၁၉။သဒ္ဓါလွန်သော် အပေးအကမ်းကျွံသည်၊ ပညာလွန်သော် အပေးအကမ်းဆွံသည်၊
သမာဓိလွန်သော် အမှုမတွင်၊ ၀ီရိယလွန်သော် အပြစ်မမြင်။
၂၀။ကျွန်လိမ်မာကို အလိုလိုက်သော်ခန့်ညားသည်၊ကျွန်မိုက်ကို အလိုလိုက်သော်စော်ကားသည်။
၂၁။မြင်ပါများတော့ငယ်၏ ၊ နမ်းပါများတော့ ပြယ်၏၊
၂၂။၀ရဇိန်လက်နက်မိုးကြိုးစက်ကား တချက်သာသေစေသည်၊ အရှင်စိုးမင်းမျက်သော်ကား ဆွေခုနှစ်ဆက်ပျက်ကြေသည်။
၂၃၊ ယုံကားယုံ၏၊အမှုမကုန်၊ အမှုကားကုန်၏၊မယုံ။
၂၅။မနိူင်အံ့သို့ကျသော် မခံဝံ့၊ မလေးအံ့ပေ့ါလျော့သော်မနိူင်။
၂၈။သစ်ပင်ထီးသော် လေညှင်းသည်၊လူထီးသော် ရန်ညှင်းသည်။
၃၁။သားမရိုသေက ကျွန်မရိုသေ၊ ကျွန်မရိုသေကဗိုလ်ခြေမခိုင်းမနှိုင်း။
ကျွန်လိမ်မာကို အလျောဝင်သော် အရှင်သခင်ကိုကျိုးနွံသည်။
၃၅။တံငါကိုအိမ်ဘက်ပြုသော် အိမ်ပျက်၏။ လူမိုက်အယူကိုနှစ်သက်သော် အမှုထွက်၏။
၄၇။လူမိုက်ကိုစေသော်ရန်တွေ့သည်၊ အရှင်စိုးမင်းမျက်သော် တနေ့ချင်းပျက်စီးသည်။
၄၉။သားမကောင်းသော် အမိအဘအကျိုးယုတ်သည်၊ကျွန်မကောင်းသော် အရှင်သတင်းပုပ်သည်။
၅၂။ရဟန်းသည်မင်းကျင့်ကိုကျင့်သော် သီလညစ်နွမ်းသည်၊ မင်းသည်ရဟန်းအကျင့်ကိုကျင့်သော်စီးပွားလစ်ဟင်းသည်။
၆၉။အပ်သွားရာကို ပုဆိန်မ၀င်၊ပေါက်ဆိန်ရာမှာ အပ်သွားမရောက်။
ခေါင်းစဉ် - မြန်မာစာ မြန်မာစကား
လွမ်းစိတ်နဲ့သေလောက်ရဲ့
အိုက်အီယာတွေ ဝေဆာဖြိုးလဲ ကိုယ်ကျိုးနဲဆဲပါ
ဆယ်ကီလို မှုန်ဝါးလေးနဲ့ မြိုသိပ်ခါကျေနပ်ပါနှမ
အရင်က ခုနစ်လနဲ့ ကျေနပ်နိုင်ဘူးသမိုင်းဆရာရယ်
ရာဇဓါတုကလျာမင်းသမီးသည် တောင်ငူခေတ်တွင်ထင်ရှားသောအမျိုးသမီး စာဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
သက္ကရာဇ် ၉၁၈-ခုနှစ်တွင် ဟံသာဝတီရွှေနန်းကို သိမ်းမြန်းစိုးစံတော်မူသော ဆင်ဖြူများရှင်မင်းတရားကြီး (ဘုရင့်နောင်)နှင့် ရာဇဒေ၀ီဘွဲ့ခံ တပယင်းစတုဂါမဏိသမီးရှင်ထွေးလှတို့သင့်မြတ်ရာမှ သားတော်ကြီး ဇင်းမယ်ဘုရင်နော်ရထာစော၊ သမီးတော်ရာဇဓါတုကလျာ၊ သားတော်အငယ် သိင်္ဃဒတ္တတို့ကို ဖွားမြင်တော်မူ သည်။ ဟံသာဝတီဆင်ဖြူများရှင်မင်းတရားကြီးသည် ဟံသာဝတီမြို့တော်ကြီးတွင် မဟာစေတီတော်ကြီးကို တည်တော်မူရာ ဓါတ်တော်မွေတော်များကို ဘုရားတွင်ဌါပနာသည့်နေ့၌ ရာဇဓါတုကလျာမင်းသမီးကို ဖွားမြင်တော်မူလေသည်။ ထိုသည်ကိုစွဲ၍ ရာဇဓါတုကလျာ ဟုတွင်ခဲ့လေသည်။
မောင်တော်နော်ရထာစောသည် ဇင်းမယ်ကိုအုပ်ချုပ်ရသဖြင့် ရာဇဓါတုကလျာကို ဇင်းမယ်ဘုရင်၏နှမ ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြသည်။ ရာဇဓါတုကလျာမင်းသမီးလေးသည် သူမချစ်ခင်မြတ်နိူးစုံမက်သော မောင်တော် နတ်သျှင်နောင်မင်းသားနှင့် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းတို့ကြောင့် မေတ္တာနှောင်ဖွဲ့ရေး နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာခဲ့သဖြင့် လွမ်းစာခွေရတုများရေးသားပြီး တပါးနှင့်တပါးကူးလူးဆက်ဆံနေရဆဲတွင် ရုတ်တရက်ချစ်ခင် နှစ်သက်သူနှင့်ကွေကွင်းလျက် မစုံမက်မနှစ်သက်သူအိမ်ရှေ့ဥပရာဇာ(မင်းကြီးစွာ)၏ လက်တွင်းသို့သက်ဆင်း ရပြီးလျှင် အိမ်ရှေ့ဥပရာဇာ ယိုးဒယားတိုက်ပွဲတွင်ကျဆုံး၍ ကံတော်ကုန်မှ ချစ်ဟောင်းနတ်သျှင်နောင်မင်းသား နှင့်ပင် စုလျားဆင်ရပြန်သည်။ သို့ရာတွင်ရာဇဓါတုကလျာသည် တောင်ငူအိမ်ရှေ့မင်းနတ်သျှင်နောင်နှင့် ကြာရှည်စွာမပေါင်းသင်းလိုက်ရပဲ ၇လမျှသာပျော်ရွှင်စွာ စံစားလိုက်ရပြီးနောက် ကွယ်လွန်ခဲ့လေသည်။
ရာဇဓါတုကလျာသည် ရတနာသုံးပါးတွင်များစွာကိုင်းရှိုင်း၏၊ သိမ်မွေ့နူးညံ့သောသဘောလည်းရှိ၏၊ ကဗျာလင်္ကာ ဖွဲ့ဆိုခြင်းအရာ၌လည်း ကျွမ်းကျင်လိမ္မာလှပေသည်။ အလွမ်းစိတ်ဓါတ်ရင့်သန်သူဖြစ်သည့်အတိုင်း ဆိုခဲ့သမျှသောစာများမှာအဓိပ္ပါယ်ကျယ်ဝန်းနက်နဲ၍ အလင်္ကာဂုဏ် ထူးကဲပြောင်မြောက်လှပေသည်။
ခေါင်းစဉ် - သမိုင်းနောက်ခံ
တောင်ငူ - ၁
တ၇ားထိုင်၊ တ၇ားမှတ်တယ် တ၇ားအလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာ ပင်ပန်းတယ် ၊ ခက်ခဲ တယ်ဆိုတဲ့သူတွေ အတွက် ဘယ်နေ၇ာေ၇ာက်ေ၇ာက် ဘာလုပ်နေနေ အ၇မ်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလေးနဲ့ လေ့ကျင့်ကြည့်၇အောင်
အချိန်နဲ့ အမျှ တို့ မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ weight တွေကို လျှော့ချရင်း စိတ်အေးချမ်းအောင်၊ အမှန်တရားနဲ့ နေထိုင်တတ်အောင် နဲ့ပျော့ပျောင်းစွာ အသေတတ်အောင် စိတ်လေ့ကျင့်ခန်း
(နေရာမရွေး အချိန်မရွေး လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။)
Relax အနေထား နဲ့ နေပါ။ တကိုယ်လုံးမှာ ရှိတဲ့ အကြောတွေကို လျှော့ထားပါ။ အကြောလေးတမျှင်တောင်မှ ဆုတ်ကိုင်မထားပါနဲ့။ (အကြောတွေ ဆုတ်ကိုင်၇င် ကိုင်သလောက် အားကုန်စေပါတယ်။ အကြော ဒုက္ခပေးတာ ခံ၇ပါတယ်။ လူလဲ ပိုအိုစေပါတယ်။)
ပထမဦးဆုံး ခန္ဓာမှာ ဥာဏ်စိုက်ထားပါ။ (သင့်၇ဲ့ စိတ်တွေ အပြင်အာရုံမှာ ငြိတွယ်မှု လျော့အောင်ပါ။) အဲ့ဒီ အချိန်မှာ မျက်စိ နား နှာခေါင်း လျှာ ကိုယ် စိတ်ကနေ တခုခု ထင်ရှားသိလာမယ်။ အဲ့လိုသိတဲ့ စိတ်ကလေးကလည်း ဆက်တိုက် ပေါ်ရင်းပျောက်ရင်းဘဲ။ အသစ်အသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ တစ်စက္ကန့် မှာ စိတ်က ကုဋေတစ်သိန်းနှုန်း ပြေးနေတယ်။ လျင်မြန် လွန်းလို့ ဦးနှောက်ဥာဏ်နဲ့့လိုက်မှီမသိနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် သိသမျှစိတ်တိုင်းကို "ဖြစ်ရုံလေး" သာ ဆက်တိုက်သိနေပေးပါ။ အဲ့ဒီသိနေတဲ့ အသိပေါ်မှာ ထပ်မစွဲအောင် ဖြစ်ရုံလေး လို့သိတဲ့ စိတ်ကို လည်း " ဖြစ်ရုံလေး "လို့ ဆက်တိုက်သိနေပေးပါ။ တခုခုသိလိုက်တာနဲ့ လျင်မြန်လွန်းတဲ့ စိတ်ကို မမှီနိုင်လို့ဒါဟာ ဘာကြီး၇ယ်လို့ ဘာသာပြန်ချိန် အဓိပါယ်လိုက်ဖော်ချိန် မရှိပါဘူး။ ဘာစိတ်ကိုမှ လက်မခံထားပါနဲ့ ။ တခုခုလက်ခံဘီ ဆိုကတည်းက အဲ့ဒီ အတွက် အပူရှိသွားပါဘီ။ ပူမှတော့ ဘယ်အေးချမ်းနိုင်တော့မလဲ။ အလေ့အကျင့် များလာတာနဲ့ အမျှ အေးချမ်းမှုတွေ ခံစားရရှိလာမှာပါ။ မိမိအေးချမ်းမှကိုယ့် ဆီက အေးချမ်းမှုတွေကို အများကို မျှနိုင်မှာပါ။ ကိုယ်က ပူလောင်နေ၇င် ကိုယ့်အပူကို အရင် ညှိမ်းနေ၇တာနဲ့ အများကိုလည်း အပူဘဲ ပေးနိုင်မှာပါ။ လောဘ ဒေါသ မောဟ စိတ်တွေ လျော့ပါးလာတာနဲ့ အမျှ ဥာဏ်အမြင်ရှင်းလာပီး အမှန်တရား အစစ်ဆိုတာကြီးကို နားလည် သဘောပေါက် လာပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်နေ၇ာေ၇ာက်ေ၇ာက် ဘာတွေလုပ်နေနေ စိတ်မှာ ပေါ်သမျှကို ဖြစ်ရုံလေး အသိဆက်တိုက်သွင်းပေးနေခြင်းကို လေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့် အမှန်တ၇ားအစစ်ကို ကိုးကွယ်နိုင်တဲ့ စိတ်အေးချမ်းမှုတွေကို အများအား မျှဝေနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့…